बजार किन १२ सयमा अड्एिको छ ? तपाईंले सोच्दै गर्दा लगानीकर्ताले लिए ३३ प्रतिशतसम्म प्रतिफल  OnlineKhabar
बजार किन १२ सयमा अड्एिको छ ? तपाईंले सोच्दै गर्दा लगानीकर्ताले लिए ३३ प्रतिशतसम्म प्रतिफल
७ चैत, काठमाडौं । सेयर बजारमा एउटा भनाई छ, ‘एभ्री ट्रेण्ड इज योर फ्रन्ड’ अर्थात् बजारको जुनै प्रवृत्ति पनि तपाईको साथी हुन सक्छ ।
तर यसबचि याद गर्नै पर्ने कुरा के हो भने बजारमा सबैबाट नाफा मात्र हुँदैन् । यो अवधिमा १२ कम्पनीको मूल्य २ प्रतिशतदेखि ५१ प्रतिशतसम्म घटेको पनि छ । यसमा केही कम्पनीको भने बोनस तथा हकप्रद समायोजनले पनि मूल्य उच्च घटेको हो । यस्तोमा प्राप्त हुने बोनस वा हकप्रदबाट केही घाटा परिपुर्ती भएको वा नाफा नै भएको अवस्था पनि हुन भने सक्छ । यसबाहेक बजार भनेको जोखिममुक्त क्षेत्र भने होइन । कतिपयले महिनौं अघिदेखि धितोपत्र बोर्डका हकप्रद तथा बोनस दर्ता गराई राख्ने गरेर बजार मूल्यमा खेल्ने गरेको उदाहरण विगतमा देखिएको थियो । त्यसैले कम्पनी वा सेयर प्रवृत्ती नबुझिकन लगानी गर्दा भने घाटामा पर्न सकिने सम्भावना नकार्न सकिदैन् ।
डेढ महिनापछि नेप्से परिसूचक पुनः १३८२ मा, ‘घाटा समायोजनमा लगानीकर्ता’
‘सर्ट टर्म’ खेल्दै लगानीकर्ता, एक सातामा २० प्रतिशतसम्म नाफा लिँदै
यसकारण १३ सय आसपासबाट फर्कने गरेको छ नेप्से
२०७३ चैत ७ गते ११:१९ मा प्रकाशित
डोटीमा बस दुर्घटना, दुईको मृत्यु